Ukuguquka kwesimo sezulu kusongela uphayini omnyama eTeruel | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uphayini omnyama, ogama lakhe lesayensi ngu UPinus uncinataLuhlobo lwe-conifer ejwayelekile ezintabeni, lapho amazinga okushisa ahlala emnene ehlobo nasekwindla, nasemakhazeni phakathi nonyaka wonke. Lezi zimo yilezo ezitholakala eSierra de Gúdar, eTeruel, enyakatho yeSpain.
Nokho, Ukuguquka kwesimo sezulu kusongela lezi zinhlobo ezinhle ngenkathi kuvumela enye, i- UPinus sylvestris, eyaziwa kangcono njenge-albar pine noma i-scots pine, ejwayelekile ezindaweni ezinesimo sezulu esishisayo, buyisela esikhundleni sayo.
Uphayini omnyama, okuyizinhlobo zikaphayini eziseningizimu kakhulu eYurophu, uthole isiphephelo ezintabeni zaseSierra de Gúdar. Yilapho izazi zezitshalo zokuqala zachaza khona ngo-1941, futhi namuhla, emashumini ambalwa eminyaka kamuva, isengozini. Inani labantu lisatshalaliswa kuma-nuclei amabili: eyokuqala, engama-hektare angaba ngu-40 emthunzini we-Peñarroya peak - phakathi kuka-1900 no-2028 metres-, nenye enye engamahektha angama-200 endaweni yase-Alto del Conventillo..
Uma ukuguquka kwesimo sezulu kuthambisa izimo zemvelo, i- UPinus sylvestris ngizozuza umhlaba ngo- UPinus uncinataHhayi nje ngoba ivumelanisa kangcono kakhulu nezindawo ezinesimo sezulu esipholile futhi esishisayo, kepha futhi ngoba nezinga lokukhula kwalo liyashesha. Ngaphezu kwalokho, ingaxubana kalula, obekuzonciphisa inani lezihlahlana ezimnyama ezimsulwa.
Ukugwema lokhu, ochwepheshe abavela eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya Nokusimama kuHulumeni wase-Aragon benze imephu ngehlathi elimnyama likaphayini besebenzisa i-GPS, behlaziya zonke izinhlobo zezitshalo ezihlala kulo. Ngaphezu kwalokho, bafunde ngokuvela kwehlathi likaphayini futhi bathathe izinyathelo zokongiwa kwabo ngokuphathwa kwamahlathi Ezintabeni Zokusetshenziswa Komphakathi.
Kusukela ngo-1992 le ngxenye yeSpain ifakiwe ngaphakathi kweNatura 2000 Network ye-European Union, futhi ngukuthi, ngokusho kochwepheshe abavela kuHulumeni wase-Aragon, uphayini omnyama ngu »igugu le-biogeographic»Ukuvikelwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kusongela uphayini omnyama eTeruel